Ulutsha lwanamhlanje lufuna ukuzalisa iinkampu zokufunda kwakhona (i-gulags) kunye nabaphikisi bemozulu: Martin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	21 Januwari 2020	• 14 Comments
Ewe akunakuphikiswa ukuba kuninzi okungalunganga ngendalo, kuba zonke iiplasitiki ezikule ndawo yethu zilunge kakhulu ngayo nayiphi na into nayo yonke into. Leyo CO2 ayilunganga imeko yezulu ngelishwa ayifakwanga kumndilili, kuba abantu abaninzi abanalo ulwazi oluchanekileyo lwebhayoloji kunye neekhemikhali kwaye ke abaqondi ukuba iplanethi le iya isiba luhlaza ngokwenyani ukusuka kwi-CO2 kwaye ubushushu behlabathi ngu Utatomkhulu ka-Greta Thunberg yenziwe phezulu. Le Sentie Arrhenius yazuza udumo ngenxa yokuba yazizuzela imbasa (kunye nabahlobo bayo) ngeBhaso likaNobel, njengomseki waloo komiti yeBhaso likaNobel.
Kukho konke okungalunganga ngemozulu, kodwa oku akubandakanyi iindlela ezinje I-HAARP yempembelelo yemozulu Ukuqonda isiphumo sokufudumeza izikhululo zosasazo ezisezantsi. Nabani na othetha ngokusetyenziswa kwesicelo sohlobo lobuchwephesha utshiswe aze abekwe kwikona yokukhetha iyelenqe; abantu abakholelwa kwi-ufos okanye bakholelwe ukuba umhlaba uyisicaba. Obu bubuchule obucacileyo bokubeka ibala kunye nokumnyama naluphi na uhlobo lokugxeka okufanelekileyo. Ngokwesiqhelo iingcali zikarhulumente zithunyelwa ukuze zilungiselele olo lwazi njengokungenaxabiso. Nangona kunjalo, yinyani elula yesayensi yokuba kukho izikhululo zemozulu ze-HAARP ezimbalwa ezinempembelelo kwihlabathi liphela. (Bukela ividiyo ukuze ubonakale kwaye ufunde apha ngezantsi).
Izazinzulu ezingavumelaniyo nentetho esemthethweni yokutshintsha kwemozulu ziye ziba Ngeemvakalelo zesisu Beka kude njengengozi kwisizukulwana esilandelayo. Iziseko zabo zesayensi zi (ngaphandle kokumamela umxholo) ngokupheleleyo kwaye ziyicime itafile. Le ntlanganiso ilandelayo yezi nzululwazi kwiPalamente yaseYurophu zibonisa indlela izazinzulu ezinjalo ezihoywa nje njengabafana ababi. (Funda ngaphezulu phantsi kwevidiyo)
Ewe, kunjalo, kufuneka kwenziwe okuthile malunga nemozulu. Yintoni ekufuneka yenzeke, umzekelo, kukuba abasemagunyeni abanoxanduva abasebenzisa itekhnoloji yasemkhosini efana ne-HAARP ukuyifudumeza inyibilike kwaye inyibilikise imililo okanye imililo yehlathi kunye nokuzisa imbalela kufuneka iphinde inyuswe ngabantu.
Nangona kunjalo, okwenzekayo ngoku kukuba abantu abakholelwa kwintsebenzo yengqondo (PsyOps) edlalwa ngayo, ukuze kufakwe inkqubo yolawulo lobuzwilakhe efuna ukuphelisa nakuphi na ukugxekwa ngurhulumente. Siqhubela phambili sisiya kwinkqubo yenkqubo yobukomanisi phantsi kwesizathu sezulu esingamanga. Ewe, buya bufudumele. Ewe, zininzi iiplasitiki kwindalo, kodwa oko akunanto yakwenza ne-CO2. Oko kunxulumene negunya lokulawula elakuqonda ukuba konke oku ukuze kudalwe le ngxaki Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo ubukhulu, apho isisombululo sikarhulumente wamapolisa obuKomanisi.
Ukuphikwa kwemo yezulu kudityaniswa nelungelo le-brand (isiNgesi: iphiko lasekunene) kwaye elo lungelo le-brand lihlulwa kwiinto zamadoda amadala angwevu anomdla kwimizi mveliso. Olo luphawu ludibene nobuchule noDonald Trump (ngumsebenzi wakhe lowo) nazo zonke iintlobo zezigcawu ezinje ngokuba 'ngumfazi-ongenabuhlobo', 'ubungqingili', 'ubuzwe', 'ukuchasana noluntu jikelele', 'urhulumente wehlabathi ochaseneyo' kunye 'neengcinga ezibuthathaka'. Kwaye uphawu lunxulumene nombono 'isisongelo kwisizukulwana esilandelayoMsgstr ". Ukuba akukho nto yenzekayo kuloo nto (ngokufudumeleyo kusetyenziswa itekhnoloji enje nge-HAARP) ukufudumala kwehlabathi, isizukulwana esilandelayo asisayi kuyenza loo nto (yiyo loo nto ingumbono wokusasazeka) kwaye ke la madoda amhlophe angabinazimpazamo angatshatanga nawo onke amabala anokuchazwa apha ngasentla kufuneka aye kwiinkampu zokufundisa kwakhona. . Ngaba ikhona into oyamkelayo ukususela ngo-30s phantsi kwe-NSDAP phakathi kwabamelwane bethu basempuma?
Al Ndabhala ngaphambili Oko ngoku kubizwa ekuhleni kwiinkampu zokufundisa. ENetherlands, yonke imithetho iqale yaziswa kuye nakubani na ophambukayo kwimibono ngokusebenzisa ngqondweni Ukukhupha ngaphandle kwendlu (jonga apha). UBernie Sanders ubonakala ekwazi ukutsala inqwelo ye-NSDAP e-United States. Ukulandela kwakhe kubonisa ezintle imikhwa yoLutsha lukaHitler kwaye ukurekhoda okufihlayo ungayibona indlela abathetha ngayo phakathi kwabo malunga nokuthatha izixhobo kunye nokuvalela abakhanyeli bemozulu kwizisele, njengoko iinkampu zokuphinda kufundiswe ngexesha leSoviet Union zazibizwa njalo. (Funda ngakumbi ngayo eli nqaku kwaye ufunde ngakumbi phantsi kwe-tweet)
UKUGQIBELA: 2ND PAID STAFFER PRAISES GULAGES
South Carolina @BernieSanders Umququzeleli weNkundla @martinthemanic: "Ndiza kulwa ndixhobile ... ndikulungele u" f ** king Revolution ";" Guillotine the rich ";" thumela amaRiphabhlikhi ukuba baphinde bangene kwiinkampu zemfundo. '
UKUKHUSELEKA KAKHULU ngo-12: 00 PM# Ukukhutshwa2020 pic.twitter.com/tUCeKEY6aM
-UJames O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 21, 2020
Ukuba uqinisekile ukuba umhlaba uzophela xa singenzi nto ngemozulu ngokukhawuleza, ndingayicingela loo nto. Sidlalwa ngetsunami yeendaba zosasazo, ngaphandle kokuqonda ukuba amajelo eendaba angazisebenzisa njani iindlela zeefilimu ukupeyinta umfanekiso wenyani ofana kakhulu neefilimu iTransanshow kunye neWag the Inja. Kananjalo siyayibona isifudumeza ngokwethu okanye sibona izikhukula ezingaphezulu kwaye injalo (ubuncinci yile nto siyikholelwayo kwimifanekiso yeendaba, ngaphandle kokuqonda ukuba zezona studio zintle zefilimu kunye neendlela zeCGI). Into ekufuneka sizibuze yona, nangona kunjalo, kukuba ingaba ingxaki ziyilwe ngabom ngoorhulumente. Ngoku ndikuva ucinga:Kulungile, ke kulungile ukuba iinkokeli zikarhulumente ziye kwiiglugs. Ukuba basebenzisa ubuchwepheshe obunjenge-HAARP ukuyenza ifudumale okanye ithintele imililo kwimililo yaseOstreliya, bububi obukhulu!"Emva koko qaphela ukuba ezo gulags azisoze zibekho iinkokheli zikarhulumente, kodwa zihlala zenzelwe abantu.
Ngaba uyafuna ukuya kwisimo samapolisa esine-fascist, urhulumenteor ongasakwaziyo ukukunyamezela ukungavisisani? Emva koko Joyina ubutshaba bemozulu obufuna imeko yamapolisa. Nangona kunjalo, asithethi malunga nokuzinikela okwethutyana kwenkululeko, sithetha ngesiphelo esichanekileyo kuyo unayo en uyakwazi ukuveza Kwimbono yakhe. Sithetha ngekamva apho umzimba omnye weengcinga unokuthotyelwa kuwo kunye nokuvalelwa entolongweni kwakhe nabani na ophambukayo kuyo. Sithetha ngorhulumente oya kujongeka njengephondo lase-China Sinkiang, apho ii-Uyghurs kufuneka ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde ziphinde zisebenze. Sithetha ngommandla owenziwe nguGeorge Orwell (umbhali wencwadi 1984) ngayo ngale ndlela ichaziwe:Ukuba ufuna umfanekiso wekamva, cinga ngebhotile etsiba ebusweni bomntu".
Ukuba uyakholelwa ukuba inkululeko yokuthetha kufuneka iqhubeke ikho kwaye ufuna ukunceda ukukhusela urhulumente ochazwe nguGeorge Orwell, ke ndixhase umsebenzi wam ngokuba lilungu.
Uludwe lwekhonkco lovimba: zelin.com, zerohedge.com
tags: UBernie, eziziimbalasane, ithamsanqa, iglugs, Greta, Gulag, HAARP, iinkampu zemfundo, mozulu, Abaphikisi bemozulu, utshintsho lwemozulu, Sanders, ISoviet, Thunberg, Umanyano
21 Januwari 2020 kwi-23: 28
Into endihlala ndiyiphosile kwezi ngxoxo zingenangqondo yindlela ilanga elihlala lishiywe ngaphandle lithathelwa ingqalelo njengeyona mpembelelo inkulu yemozulu yethu. Xa imozulu ishushu, ilanga ngokwendalo lidlala indima koku, kanye njengokuba nelanga lidlala indima xa indawo iphola. Sibiza loo mijikelo yendalo ..
Iintsomi ezisebenzayo ezityhalela phambili kumbala kumbono wehlabathi ngokufuthi aziqapheli nokuba kukho i-ajenda eyimfihlo emva kwayo. Ngokwesiqhelo ukuncitshiswa kwabemi kunye nokuhlawula irhafu izinto ezisele.
ps: ukuphela kweminyaka engamashumi asixhenxe inzululwazi yaxela kwangaphambili ukuba ixesha lomkhenkce liyeza. Imagneti emantla (emantla emantla) kutshanje uye eSiberia, ewe idd apho iigulags zazikhona 😀
21 Januwari 2020 kwi-23: 45
ewe ndiye ndafunda esikolweni ukuba i-CO2 (ikharbon diokthoni) yinto ebalulekileyo yokungenisa izityalo kwaye ibaluleke kakhulu kwinkqubo yefotosinthesisi. Kokwahlukileyo ngaphandle kwento yokuba sizizidalwa ezisekwe kwikhabhoni.
Well andazi ukuba zifundisa ntoni ngoku, kodwa ayikho kangako.
18 Februwari 2020 kwi-08: 52
Ikhabhoni isekelwe kwinyaniso?
Ukususela kwi-25: 00
Ukususela nge-1: 01:00
22 Januwari 2020 kwi-21: 11
Kwaye ngequbuliso zafika iindaba, iCloud seeding enye yeendlela ezinokwenzeka zokuxhaphaza imozulu.
Isibakala sokuba bezilinga amashumi eminyaka kunye nezo i-antennas ze-tesla kunye neekhemikhali njl, nangoku, zihlala zithe cwaka.
Umjelo womjelo wokugqobhoza, ukulawula amaqondo obushushu, ukudala amafu emichiza, ukulawula amafu, ukondla nokulawula izaqhwithi, ukufudumeza ubume bendawo njl njl.
Kwaye yintoni le yokwenyani okanye bubuxoki?
Into endiyaziyo kukuba bendihleli apho kangangexesha elineminyaka engama-34, kodwa andikaze ndibone iphethini kumaza am kwimemori yam. Andizange ndimbone isibhakabhaka esinesiqingatha esinomtya ohlukileyo wokwahlula ukusuka kumoya ococekileyo ogqibeleleyo ukuya kwilifu elinamafu kwaye ngamanye amaxesha kwipateni. Ukuba ujonga amafu uhlala ubona le ndlela ingaqhelekanga yamandla ombane kwiindawo ezahlukeneyo, kodwa hayi yonke imihla.
Kule mihla kukho ikhava entsha "yelifu, eyayingekabikho kwi-atlas yelifu. Umzekelo:
Ngokucacileyo jonga amafu endalo ngaphezulu kweentaba nangaphezulu ukuba i-cocktail yakho entsha yemichiza yokuhambahamba ilungiselelwe ukwenziwa ngumntu. Yoyikisa nje i-Undulatus Asperatus kwiividiyo nakwiifoto. Ngamanye amaxesha kakhulu kangangokuba unokubona amaza erediyo mega, angazange abonwe, kodwa kule mihla kunokwenzeka.
Inokwenzeka njani into yokuba iminyaka embalwa edlulileyo iphinde iphinde ibuye ukuba amaqondo obushushu ahlukeneyo, imvula, izaqhwithi zembalela njlnjl iirekhodi zaphukile?
Ewe ewe mhlawumbi iifoto ziyafumaneka, kodwa zeziphi ezi mifanekiso ze-satellite zeNASA?
Ngaba sijongana nobunjineli bejeo yemihla ngemihla apha?
Ngaba unokuthenga itikiti lokuqinisekisa imozulu entle kumthendeleko hahaha?
Lawula imozulu yakho, ubukhali bufumaneka nakwiselfowuni kwaye abantu abami ngxi.
okanye ndibabone bebhabha, loo mafu ...
22 Januwari 2020 kwi-21: 31
Kwaye ungalibali ukuba "isandi esivela ezulwini" sivakala kwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela kubandakanya iNetherlands. EYerusalem bade benza ilifu lokujikeleza kunye nesandi sexilongo.
22 Januwari 2020 kwi-21: 53
Iimeko zentshabalalo ye-IPCC zibonakala zithembisa kakhulu, kuba zibambisene neUN. Yonke imithombo yeendaba ngaphandle kwamathandabuzo ithatha olu hlobo lomyalezo ngaphandle kokwenza uphando lwabo.
Ewe, apha iibhiliyoni okanye iidriliyoni zeedola kushukuxwa ngazo, umntu akanakuqinisekisa okanye akukhanyele oku.
22 Januwari 2020 kwi-22: 24
Kwabakhanyekayo kwiindlela zokuphembelela imozulu kwiBhunga laseMazantsi eMozulu ngeMishini:
Umsebenzi we-North American Weather Mod Council (NAWMC) kukuphucula ukusetyenziswa kweetekhnoloji yokutshintsha kwemozulu ngemfundo, ngokunyusa kunye nophando. IBhunga lisebenza njengeforum yokutshintshiselana ngolwazi kwimicimbi yokutshintsha kwemozulu; ukukhuthaza ukusetyenziswa ngokukuko kwezi teknoloji ukongeza ubushushu, ukucinezela ukonakalisa isichotho, kunye nokudambisa inkungu; kunye nokuqhubela phambili imisebenzi yophando kunye nophuhliso yokwandisa ulwazi lwesayensi malunga nokutshintsha kwemozulu.
Nika ingqalelo ekhethekileyo kwinto yokuba babhala ngobuninzi.
Ngolwazi oluthe kratya jonga http://www.nawmc.org/
29 Januwari 2020 kwi-21: 03
Mhlawumbi sisihloko okanye isihloko kodwa ndifunde into ekhethekileyo kwileta yemihla ngemihla, https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7933509/Anne-Franks-step-sister-claims-photos-showing-liberation-Auschwitz-FAKE.html
Ngokuka-dade wodadewabo ka-Anne Frank, iifoto zenkululeko ye-Auschwitz ziyinyani. Ndothuke ngokupheleleyo.
13 Matshi 2020 kwi-22: 55
kwaye intsholongwane isasazeka
13 Matshi 2020 kwi-22: 58
Ewe, umkhosi wase-US unokujonga imeko yonxunguphalo kwaye bonke banesitofu sokugonya se-DARPA abakhuselweyo kwilifu kuyo yonke intsholongwane 😉
13 Matshi 2020 kwi-23: 26
Ukukhusela iYurophu 20 yinto esimele sigcine iso kuyo. Kunokwenzeka ukuba yithiyetha lemfazwe empuma kunye nokungqubana kweRussia.
13 Matshi 2020 kwi-23: 40
Ewe, ukuya kwi-DARPA, konke kuyangqinelana:
Izazinzulu zaseMelika zaseMelika ndinethemba lokuba noNyango lweCoronavirus Ngehlobo
Indlela entsha isebenzise i-RNA okanye i-DNA ukunceda umzimba ekuqulunqeni ii-antibodies kwisifo esisasazeka ngokukhawuleza.
Inkqubo yophando yasemkhosini yase-US efuna indlela entsha yokwandisa ukungakhuseleki komzimba kwiintsholongwane ingatshintsha indlela oorhulumente kunye namajoni azilungiselela ngayo isifo sephepha-kwaye inokufika ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuncedisa ngokuqhambuka kwe-COVID-19.
Iplatifomu yokuthintela isifo kwiDarPA
14 Matshi 2020 kwi-10: 50
Ukuba loo majoni aseMelika eza ngequbuliso yinto yokugcina iliso. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uPutin wanika i-petrodollar ukuluma ngokusebenzisa i-OPEC, ngokucacileyo le yimpendulo.
U-Putin ulahla i-OPEC ukuqala imfazwe kunye nomzi-mveliso weoyile wase-America
kwi-3 / 8 / 2020
14 Matshi 2020 kwi-11: 25
vuma, ngoku ukuba ininzi iphazamisekile kwi-Wuhan-400 PsyOp, iziqwenga zeChess ngokuthe ngcembe kwaye zisiwe ngasese kwinqanaba lehlabathi.
Baxakekile zizo zonke iintlobo zomsebenzi ekugqibeleni ezinenjongo enye yokufaka amandla angaphezulu kwizandla zabarhanelwa abaqhelekileyo. Umntu uya kuhlala efumana isisizathu sempixwano yehlabathi:
« I-coronavirus evela eTshayina ibonelela nge-alibi efanelekileyo kwisibophelelo sokugonya kwihlabathi
Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1 »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.475.200